အေမဇုန္တြင္ ေစ်းေရာင္းခ်ေနေသာ “တ႐ုတ္ေရွးေဟာင္းသစ္သီး၀လံတင္း” မ်ားမွာ ညဥ့္အိုးမ်ားကဲ့သို႔ - Pandaily
Categories: Culture ကိုXintian Wang ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 26, 2021 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 28, 2021 မှာ Posted
“ ချစ်စရာကောင်းပြီး ရှေးဟောင်းပုံစံ ဒီဇိုင်းတွေကို နှစ်ပေါင်း ၆၀ လောက် ပြန်ပြင်ပေးတယ်.. မီးဖိုချောင်မှာ မရှိမဖြစ်အလှဆင်ပေးတယ်.. တရုတ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေက ကြွေနေရုံသာမက အသီးအနှံတွေ တောင်းတဲ့အခါ အသုံးပြုလို့ရတယ်၊ ရေခဲပုံးတွေကိုလည်း သိုလှောင်ထားလို့ရတယ်” လို့ အမေဇုန်ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ဖော်ပြရေးသားခဲ့ပါတယ်။
“ တရုတ်ရှေးဟောင်းသီးတင်းစာ” ကို လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ အမေဇုန်မှာ တစ်လကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၀ ကနေ ၆၂ ဒေါ်လာအတွင်း ရောင်းချနေပြီး တရုတ်ထုတ် ကုန်ပစ္စည်းတွေကို Alibaba ရဲ့ Taobao Platform မှာ ၂၇ ယွမ် (၄ ဒေါ်လာခန့်) နဲ့သာ ရောင်းချနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Topics: မြင်ကွင်း၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာတော့ Taobao Treasure Product မှာ ကြေငြာ: Mask, ကြက်ဥ ကစားခြင်း၊ ကြောင်စာကျွေးခြင်း၊ မျက်မမြင်ဘောက်စ် စတာတွေ
(Photo Source: အေမဇုန္)
တရုတ်နိုင်ငံမှ သုံးစွဲသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် မက်တစ်က Weibo ဝက်ဘ် ဆိုက်တွင် တွစ်တာတွင် ရေးသားခဲ့ပြီး “ ကျွန်တော်သိချင်တာက နိုင်ငံခြားဝယ်သူကို ဒီပစ္စည်းကို ရှာတွေ့ပြီး နောက်တရုတ်ကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ” ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
အစဥ္အလာ Tan Jade တရုတ်မှာ ဒီကွန်တိန်နာတွေဟာ တံတွေးတွေကို စုဆောင်းရာမှာ အဓိက အသုံးပြုကြပေမယ့် ရွေ့လျားသန့်စင်ခန်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ ၁၉၈၀ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွေအတွင်း တရုတ်မိသားစုတွေ အသုံးများခဲ့တဲ့ အိမ်တွင်း ရေချိုးခန်းတခုလုံးကို မှီပြီး အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္က အေရးပါတဲ့ဓာတ္ပံုကို ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတဦးျဖစ္တဲ့ ထန္က်င္းပင္ဟာ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥစ္သက္ခ်ာနဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်ိန္မွာ လက္ဝါးကပ္တိုင္ကေန ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၀ နှစ်များအတွင်းက စတင်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတခုဖြစ်သော Cric ၏ ယဉ်ကျေးမှုကို မြှင့်တင်ရန် လိုကြောင်းနှင့် ခေတ်သစ် ဤလှုပ်ရှားမှုသည် ၁၉၈၀ နှစ်များ နောက်ပိုင်းတွင် ထန်ပါး၏ ထောက်ခံမှုကို ရရှိခဲ့သည်။
(Source: AFP, Corbis)
ယေန႔ေခတ္တြင္ မိဘအခ်ိဳ႕သည္ &nbsp &ယုတမ် ကလေးတွေအတွက် လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ အိမ်သာပါ။ တခြားခေတ်ပြိုင်အိမ်သာတွေမှာ သက်တောင့်သက်သာ ပါဝင်တာကြောင့် သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ၊ မသန်စွမ်း သူတွေကို ကူညီနိုင်စွမ်း ကန့်သတ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေလဲရှိပါတယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ ညဉ့်အိုးတွေကို အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး လမ်းလျှောက်ရတာ အခက်အခဲရှိတဲ့ လူတွေကို ကူညီဖို့ပါ။
အခုေခတ္ Taobao မွာ Night Over Photo ျဖစ္ပါတယ္။ (Source: Taobao)
လက်ရှိတွင် တရုတ်နယ်စပ်မှ လျှပ်စစ်ကုန်သည်အများအပြားသည် ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် တရုတ်ရိုးရာ ပစ္စည်းဝယ်လိုအား မြင့်တက်လာနေသည်။ DHGATE ရဲ့ Public Relations Manager ဖြစ်သူ Pandaily က ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က တရုတ်ရိုးရာလက်မှု ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဝယ်လိုအားဟာ ၂၁၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာပြီး ပန်ကာလိုမျိုး ပန်းကန်တွေ၊ ကြွေဆင်းလက်ဝတ်ရတနာတွေ စတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
ထိုအခါ တရုတ်ရိုးရာဓလေ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ပြည်ပမှာ ဘယ်လိုရူးသွပ်မှုမျိုးမှ မရှိသေးဘူးလား?။
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ သုံးစွဲသူတစ်ဦးရဲ့ ပုံတစ်ပုံကို တင်ခဲ့ပြီး ဒီပုံဟာ ဒေါ်လာ ၆၀ တန်ဖိုးရှိတဲ့ တရုတ်ရှေးဟောင်းကြွေလွှာပန်းကန်လုံးတွေကို အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စိန်ဝိုင်၊ လတ်ဆတ်တဲ့ လယ်ယာထွက်ကုန်၊ ရေခဲပြင်၊ မီးဖိုချောင်နဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ ဂျိုးဆက်ရဲ့ အလှုမင်္ဂလာလက်ဆောင် တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ “ေရွးေဟာင္းအသီးတင္း” ဟာ အလ်င္အျမန္ ေရပန္းစားလာခဲ့ပါတယ္။
(Photo Credit: တြစ္တာ)
ဒီပို့စ်ဟာ တရုတ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေကြားမှာ ကျယ်ပြန့်စွာ ပျံ့နှံ့သွားပြီး အလျင်အမြန်ပဲ သူတို့ကိုယ်သူတို့ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစွာ မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ အမေရိကန် လျှပ်စစ်ကုန်သည်ကြီးတွေရဲ့ စျေးကွက် ကို ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။
“ ေဒၚလာ ၆၀လား? မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပဲ ကၽြန္မကေလးေလးအတြက္ တစ္အိုးဖိုးေတာင္ ေပးေနရေသးတယ္” ဟု သံုးစြဲသူတစ္ဦးက Weibo တြင္ ေနာက္ေျပာင္၍
Weibo ေပၚမွာ ေရးသားခဲ့တဲ့ မွတ္ခ်က္တစ္ခုမွာေတာ့ “ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံေတြကို ဘယ္သူမွ ဒီလိုဝယ္ခ်င္ၾကတယ္” လို႔ ေရးသားခဲ့ျပီး ” တရုတ္မိတ္ေဆြေတြက လက္ေဆာင္ေပးတဲ့အခါ တရုတ္ေတြက လွလွပပ ထုပ္ပိုးေပးတာကို ျမင္လိုက္ရတာမို႔ တရုတ္ေတြက အသာတၾကည္နဲ႔ ဆႏ္ၵျပၾကတယ္၊ အထဲမွာေတာ့ အသီးအႏွံေတြဝတ္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ေျပာပါတယ္” လို႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
ဒါက Night Out ဆိုတဲ့ အငြင်းပွားမှုနဲ့လည်း ဆိုင်တယ်၊ နောက်တခုကတော့ ဒီအပေါ်မှာ ဆွေးနွေးမှာလား၊ Culture ကို ကိုယ်စားပြုမှာလား ဆိုတာမျိုးပေါ့။
Weibo သံုးစြဲသူတစ္ေယာက္က “ အေနာက္တိုင္းသားေတြ ဘယ္လိုသံုးရမွန္းေတာင္ မသိပါဘူး” လို႔ေရးသားခဲ႔ေပမဲ႔ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ ကစ္ကစ္ ကိုျမင္ခဲ႔ရပါေသးတယ္ “ လို႔ ေရးသားခဲ႔ပါတယ္။ သူရည်ညွှန်းတဲ့ ကံကောင်းထောက်မစွာ ကစ်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လူကြိုက်များပြီး ပြည်တွင်းမှာလည်း တရုတ်သင်္ကေတအဖြစ် မြင်လေ့ရှိပေမယ့် ဒါဟာ တရုတ်သမိုင်းရဲ့ သဲလွန်စတခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အရွှန်းဖောက်တာတွေ ရှိပေမယ့် အနောက်တိုင်းသားတွေက မျက်မမြင်တွေကို လိုက်ရှာတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ရှိပေမယ့် လူတော်တော်များများကတော့ ဒီယဉ်ကျေးမှုကို တန်ဖိုးထားကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Weibo မွာ ေရးခဲ့တဲ့ “တျခားယဥ္ေက်းမႈေတြထဲမွာ ဘယ္လိုအရာေတြကို သံုးထားသလဲ” ဆိုတဲ့ စာသားေလးကေတာ့ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေနၿပီး ဆက္ၿပီး “ဝယ္သူႀကိဳက္သ၍ ဝယ္သူႀကိဳက္သ၍ “မူရင္း” ကို ဘယ္လိုသံုးထားသလဲလို႔ ေမးစရာေတာင္ မလိုေတာ့ပါဘူး” လို႔ ေရးထားပါ တယ္။
Weibo အသုံးပြုသူတစ်ယောက်က သူ့ဆန္ဒအလျောက် အနောက်တိုင်းသားတွေအတွက် Sunkist လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ကို အသုံးပြုပြီး ညဉ့်အိုးထဲမှာ ရှန်ပိန်ပုလင်းတစ်လုံးထည့်ကာ တရုတ်ရိုးရာကြွေလွှာတွေကို လက်ဖက်ရည် ခွက်ထဲထည့်သောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ တရုတ်ထုတ်ကုန်တွေကို ပြည်ပမှာ ပထမဆုံးအကြူးလွန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ-အရွယ်ရောက်ပြီးဆိုရင် ငရုတ်သီးခြောက်ဟာ အနောက်တိုင်းမှာခေတ်စားနေပြီ။ တရုတ်အီးကောမာ့စ် ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ Taobao အမျိုးအစား ပဲပုပ် အလေးချိန် ၂၈၀ ဂရမ်၊ ငရုတ်ဆီ အလေးချိန် ၁၁ ယွမ် (၁.၇ ဒေါ်လာ) နဲ့ ရောင်းချနေပြီး ငရုတ်ဆီ တဗူးတည်းကိုပဲ အမေဇုန်မှာ ၈.၉၉ ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းချနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီငရုတ္ဆီေတာင္မွ Facebook ေပၚမွာ Fan Club တစ္ခုရွိပါတယ္။ Old Mother Awards ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအသင်းဝင် ၃.၈ သန်းရှိပါတယ်။
Simon Stahli က “The Old Shield Agency” ဆိုတဲ့ Facebook Page ကို တည်ထောင်သူပါ။ (Simon Starley Grande)
“အနောက်တိုင်းသားတွေဟာ တရုတ်လူမျိုးတွေလိုပဲ ထင်မှတ်မထားတဲ့ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွေ ရှိတတ်တယ် – အဲဒီအရာတွေကို အလွန်အမင်းစဉ်းစားကြလိမ့်မယ်” တဲ့။ပံုေတာင္မလွဘူး’’ (Portwood, Glory Glory) ဆိုတဲ့ Facebook fan page ကို ဖန်တီးသူ အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ် Simon Stalley (Simon Stahli) က သူဟာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံက အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးရဲ့.
Stalley က ဆက်ပြီး “လူတွေရဲ့ဘဝဟာ ရိုးရှင်းပြီး ပျော်ရွင်စရာ ကောင်းပါတယ်၊ စားသုံးသူတွေရဲ့ဈေးကွက်အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းလာတယ်.. စားသုံးသူတွေရဲ့အလေ့အထဟာ အခုထက်ထိ ပိုမိုကြီးမားလာပြီး သူတို့တွေဟာ ဇာတ်ဆောင်တွေနဲ့ မျှော်လင့်မထားတဲ့ အရာတွေကို ရှာဖွေနေတယ်” ဟု ဆိုသည်။